सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरू, ओली गए कि गएनन् ? — Sanchar Kendra
सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरू, ओली गए कि गएनन् ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि सभामुख सापकोटाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी छन्। सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बैठकमा बोलाएका थिए।
अरू सबै दल बैठकमा सहभागी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधि बैठकमा आएका छैनन्। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बोकेर नहिँड्ने बताएका छन् ।
सोमबार ३ घण्टा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई एमालेले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताएका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग र एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पट हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सांसदहरुको जिज्ञासापछि जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणविरुद्धको महाभियोगमा गम्भिर षड्यन्त्र लुकेको भन्दै आवश्यक परे सडक, अदालत र संसदबाट समेत प्रतिवाद गर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले महाभियोगपछिको अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्न उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणामाथि आएको प्रस्ताव चुनाव सार्न र टार्न र एमसीसी पास गर्ने प्रवृत्तिका रुपमा आएको छ’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेको धारणा उदृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘यो व्यक्ति विशेषमात्रै होइन, समग्र लोकतन्त्र र संविधान माथिकै प्रहार हो ।’
त्यस्तै उनले चोलेन्द्रलाई बोकेर नहिँड्ने पनि प्रस्ट पारेका थिए । ‘एमालेको मनसाय चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, । उहाँसँग एमालेको धेरै असन्तुष्टि छन् । तैपनि यो वेलामा अदालत गिजोल्ने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले आएको हो । आवश्यक परे सडक, संसदबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’